IOS 10 ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
လွန်ခဲ့သော ၁၂ နာရီကျော်က Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်နောက်ဆုံး OS ကိုနောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဗားရှင်းသည် iPhone နှင့် iPad အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ပစ္စည်းကိုအေးခဲစွာမြင်သောကြောင့်လိုအပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက် iTunes နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပါမည်.
အက်ပဲလ်ဟာပြquicklyနာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြသနာကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သုံးစွဲသူအုပ်စုငယ်လေးကိုတကယ်ပဲထိခိုက်ခဲ့တယ်။ အသုံးပြုသူအချို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာ Apple Music playlists နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ iOS 10 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်အက်ပ်မှပျောက်ကွယ်သွားသောစာရင်းများ.
ဆာဗာများထပ်မံကျဆင်းသွားပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည်သူတို့၏စက်ကိရိယာကိုပြwithoutနာမရှိဘဲ update လုပ်ရန်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း firmware ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ရန်နာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အခမဲ့အချိန်ရှိရင်သူတို့ရဲ့စက်ကိုမွမ်းမံနိုင်တယ်iTunes မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ PC သို့မဟုတ် Mac သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူရန်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပါ။
ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ firmwares သို့တိုက်ရိုက်လင့်များ သင်၏စက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ် iOS ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံရန်။ ဤနောက်ဆုံး iOS ဗားရှင်းသည် iPhone 5၊ iPad Mini 2၊ စတုတ္ထမျိုးဆက် iPad နှင့်ဆဌမမျိုးဆက် iPod touch တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။
1 IOS 10 သည် iPhone အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
2 IOS 10 သည် iPad အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
3 IOS 10 iPod touch အတွက်လင့်ခ်များကိုရယူပါ
IOS 10 သည် iPhone အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
iPhone 6s၊ iPhone6- iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iPhone 6s Plus၊ iPhone6Plus - iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
အိုင်ဖုန်း 5s - iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iPhone 5၊ iPhone 5c - iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
IOS 10 သည် iPad အတွက် Links များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
၉.၇ လက်မ iPad Pro - iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
၉.၇ လက်မ iPad Pro - iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iPad mini 4၊ iPad Air 2၊ iPad mini3- iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iPad Air၊ iPad mini2- iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
စတုတ္ထမျိုးဆက် iPad - iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
IOS 10 iPod touch အတွက်လင့်ခ်များကိုရယူပါ
iPod Touch ၆ မျိုးဆက် - iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
ပထမ ဦး စွာ iTunes ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မနေ့ကအက်ပဲလ်ဟာ iTunes အသစ်အသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ၊ ဤဖိုင်ကိုတပ်ဆင်ရန်သင် Windows မှလုပ်ဆောင်လျှင် shift key ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် CMD key ကိုနှိပ်နေစဉ် restore ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် restore ကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ ၀ င်းဒိုးထဲမှာ၊ ကိရိယာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသည့် firmware ကိုရွေးချယ်ပါ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်အကောင့်ထဲသို့ယူရမည်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ device ကို update လုပ်ဖို့ကိုလိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စက်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များမဆုံးရှုံးစေဘဲအခြေအနေများတွင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 10 » IOS 10 download link များ
ကျွန်ုပ်တွင် GM ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအသစ် ထပ်မံ၍ ခွင့်ပြုပါသလား၊ သို့မဟုတ်ထပ်တူဖြစ်ပါသလား။ GM သက်တမ်းကုန်သွားပြီလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Golden Master သည်မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောတူညီသည့်အရာ ဖြစ်၍ သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ပျူတာ (သို့) Mac မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Betas နှင့်အတူရှိပါကမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသနည်း။
သင် beta များနှင့်ကစားခဲ့လျှင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့သော Golden Master သို့သင်အမှန်အကန်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မနေ့က Apple ထုတ်ပြန်သည့်တူညီသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ၊ သင်တရားဝင် iOS 10 နှင့်အတူရှိနေသည်။
ခရစ္စတိုဖာ valencia ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းကိုယခု OTA မှတဆင့်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်
Christopher valencia သို့ပြန်သွားပါ
မှန်ကန်သော အဆင့်မြှင့်တင်မှုမပေါ်ပါက Settings> Software update ကိုသွားပါ
ငါ့မှာရွှေရောင်ဗားရှင်း ios 10 ရှိတယ် ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ app နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအသေးစိတ်အချက်တွေပဲရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာတူညီတဲ့အသံရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲသိလား။ ပြီးတော့အဲဒါကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာငါ့ကိုမရိုသေဘူး
ipad2အဘို့
IPad2သည် iOS 10 နှင့်မကိုက်ညီပါ။
ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ getios.com စာမျက်နှာမှာ global7iphone နဲ့ iphone7အတွက်ရတယ်
Harllan helmer ဟုသူကပြောသည်
IOS အတွက် trocar သို့မဟုတ် Android operating system ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား။
Harllan Helmer အားစာပြန်ပါ
ipod touch 5G သည် ios 10 အတွက်သင့်တော်ပါသလား။
Todoist, iOS 10 ၏အားသာချက်အားဖြင့်ရယူခြင်းကို update ပြုလုပ်ထားသည်
WhatsApp ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Siri မှတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည်